Abwaan – Wargeyska Waxgarad
Home / Abwaan
September 29, 2017	Abwaan, Mux39-Okt17 0
Xilli-tirsiga Hijriga loo yaqaanno ee Muslimiintu ay adeegsadaan waxa uu ka bilowdaa sannadkii uu Nebigu scw u hijrooday Madiinah. Ereyga ‘hijri‘ waxa uu ka yimid hijrah. Xilli-tirsiga hijriga ah waxaa dejiyey khaliifkii labaad ee Muslimiinta, Cumar ibnul Khaddaab rc. Sababtana culumada taariikhdu waxa ay ku sheegaan in loo keenay dacwad …
Muxarram waa bisha koowaad ee sannadka hijriga ah. Waxa ayna ka mid tahay afarta bilood ee xurmada leh (الأشهر الحرم). Xilligii Cumar ibnul Khaddaab- Alle ha ka raalli noqdo e- markii taariikh-tirsiga hijriga ah la dejinayey ayaa ay Muslimiintu ku heshiiyeen in ay Muxarram noqoto bisha sannadku ka bilowdo, maadaama …